Ethereum Code - Kuvanzika
Inokosha Njodzi Cherechedzo: Kutengesa forex kunogona kuburitsa yakakosha purofiti asi zvakare kune kwakanyanya kufungidzira uye kunosanganisira yakakwira nhanho yengozi iyo inogona kukonzeresa kukwana kana kuzere kurasikirwa kwemari. Isu tinokurudzira kuti iwe uverenge yedu Risk Disclaimer & Mitemo usafungidzire nemari yausingakwanise kurasikirwa nayo. Vatengi vanofanirwa kuziva yavo yemunhu capital kuwana mutero mutero munyika yavo yekugara. Ethereum Code Bot haigamuchire chero chikwereti chekurasikirwa kana kukuvara nekuda kwekuvimba neruzivo rwuri mukati mewebsite ino. Zvinopesana nemutemo kukumbira vanhu veUS kutenga uye kutengesa zvibvumirano, kunyange zvikanzi zvibvumirano zve 'kufanotaura', kunze kwekunge zvakanyorwa pakutengesa nekutengesa pachinjana chakanyoreswa neCFTC kana kunze kwekunge vasunungurwa zviri pamutemo.